မွို့ကွီးတှမှောလဲ ဂြီနိုဆိုဒျ အရိပျအရောငျ | AAS Burmese
by အောငျအောငျ March 8, 2021
by အောငျအောငျ March 8, 2021 240 views
ဓါတျပုံ - Reuters
ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွသူတှကေို မတရားပဈသတျတယျ။ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားတဲ့ ကြောငျးသားလူငယျနဲ့ ပွညျသူ အရအေတှကျက 2000 ကြျောရှိနပွေီ။ အဲဒီအဖမျးဆီးခံထားရသူတှအေနကျ အခြို့က ဘယျနရောထားသလဲဆိုတာတောငျ မသိကွဘူး။ ဒါက Genocide မွောကျတဲ့အခကျြတှအေနကျ အခကျြတဈခကျြဖွဈတဲ့ Forced disappearance မွောကျပါတယျ။ ပြောကျနတေဲ့ ကလေးအရအေတှကျကို အမွနျဆုံး စုဆောငျးကွပါ။ ရပျကှကျတိုငျးမှာ အဲသလို သတငျးအစအနပြောကျနတေဲ့ကလေးရှိရငျ စာရငျးကောကျပွီး Human Rights Watch အရောကျအမွနျဆုံး ပို့ပေးကွပါ။ အိမျတံခါးရိုကျခြိုးပွီး အိမျထဲဝငျတာ၊ ရှငှေဖေုနျးအစရှိတဲ့ဟာကို လုယူတာ၊ ပစ်စညျးတှရေိုကျခြိုးပကျြစီးတာ ရကျရကျစကျသတျနတောတှအေားလုံးက 2012 ကနေ 2017 အထိ ရိုဟငျဂြာတှကေို လုပျခဲ့တဲ့အကှကျတှပေါ။ ပွညျသူတှငွေိမျနရေငျ အိမျထဲဝငျပွီး မုဒိနျးကငျြ့ပါလိမျ့မယျ။ လူတိုငျးတျောလှနျရေးမှာ ပါဝငျကွပါ။
မြို့ကြီးတွေမှာလဲ ဂျီနိုဆိုဒ် အရိပ်အရောင်
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို မတရားပစ်သတ်တယ်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်နဲ့ ပြည်သူ အရေအတွက်က 2000 ကျော်ရှိနေပြီ။ အဲဒီအဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအနက် အချို့က ဘယ်နေရာထားသလဲဆိုတာတောင် မသိကြဘူး။ ဒါက Genocide မြောက်တဲ့အချက်တွေအနက် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Forced disappearance မြောက်ပါတယ်။ ပျောက်နေတဲ့ ကလေးအရေအတွက်ကို အမြန်ဆုံး စုဆောင်းကြပါ။ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ အဲသလို သတင်းအစအနပျောက်နေတဲ့ကလေးရှိရင် စာရင်းကောက်ပြီး Human Rights Watch အရောက်အမြန်ဆုံး ပို့ပေးကြပါ။ အိမ်တံခါးရိုက်ချိုးပြီး အိမ်ထဲဝင်တာ၊ ရွှေငွေဖုန်းအစရှိတဲ့ဟာကို လုယူတာ၊ ပစ္စည်းတွေရိုက်ချိုးပျက်စီးတာ ရက်ရက်စက်သတ်နေတာတွေအားလုံးက 2012 ကနေ 2017 အထိ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်တွေပါ။ ပြည်သူတွေငြိမ်နေရင် အိမ်ထဲဝင်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ကြပါ။
Alert! Alert! More than 2000 students who peacefully protested against military junta of #Myanmar were arrested from 2-2-21 to 8-3-21 and some of them face forced disappearance. Urgent International Investigation please. #WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance #PyitTineHtaung
— Aung Aung (@Aungaungsittwe) March 8, 2021
မငျးအောငျလှိုငျက လကျနကျမဲ့ ပွညျသူကို စဈကညြောပွီလား
တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲ ကျင်းပရခြင်းက တပ်မတော်ကို မုန်းတဲ့လူများနေလို့ပဲ
ဂျီနိုဆိုဒ် တရားခံ ဦးရဲထွဋ် အစိုးရကို ဗြောင်တိုက်ခိုက်နေပြီလား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဇီဝါဒ ကျင့်သုံးနေကြောင့် ဦးရဲထွဋ်ဝန်ခံ
Bomb blast occured insidea#Mosque of Meiktila. Many people said it might be evil act of State Administration Coun… https://t.co/6pIM1RrByC
ဘဏျစနဈပွိုလဲသှားခွငျးက စကစ ကဆြုံးနခွေငျးပဲ အပွညျ့အစုံသို့ - https://t.co/OInY9egho1 @NUGMyanmar @cvdom2021… https://t.co/hbeurP6HRc
ရိုအရေးနဲ့ပတျသကျလာရငျ ရခိုငျတှရေဲ့ ဆန်ဒကိုလဲ ဦးစားပေးရမယျ ပွောတော့ "ရခိုငျက ဂြီနိုဆိုဒျတရားခံဖွဈနတောလား၊ သို့တညျးမ… https://t.co/iy3P3n4tAX
ရိုဟငျဂြာအကွောငျး ဘာကွောငျ့ ပါလာရတာလဲ။ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ တရားမြှတမှုစံနှုံးနဲ့ ပတျသကျလာရငျ အမရေိကနျနဲ့ ဥရောပသားတှကေ… https://t.co/Wt6g1LOCtB
နာဇီတှကေ ဂြူးတှအေပျေါလုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ရကျစကျကွမျးကွုတျမှုတှအေတှကျ ဂြာမနျတဈမြိုးသားလုံးက ပေးဆပျခဲ့ရသကဲ့သို့ ရိုဟငျဂြ… https://t.co/i5krufQ9Ia
ရခိုငျ၊ ရိုဟငျဂြာနှငျ့အနာဂတျ အာရကနျ
အာဆီယံဆှနှေေးပှဲက တရားခံကို တရားလိုနဲ့ တတနျးတညျးထားခွငျးလား
CRPH ICJ NLD အစိုးရ ကမန်တိုင်းရင်းသား ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဂျီနိုဆိုဒ် စစ်အာဏာရှင်များ စဈတပျအာဏာသိမျးမှု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တရုတ် တရုတျ ဒီမိုကရေစီ ဒေါကျတာအေးမောငျ ပညာရေး မင်းအောင်လှိုင် မင်းအောင်လှိုင် မဘသ မုဒိန်းတပ်မတော် မွတ်စလင် ရက်ခိုငျ့တပျမတျော ရခိုင် ရခိုင်အရေး ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုငျ ရိုဟင်ဂျာ ရိုဟငျဂြာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အဝကျွန်းသားရခိုင် အာနန်ကော်မရှင် အိခ်လားဆွ် အိမ်ထောင်စုစာရင်း အိုင်စီစီ ဦးရဲထွဋ် ဦးသိန်းစိန် ဦးနေဝင်း ဦးအောင်ဇော်ဝင်း ဒေါက်တာအေးမောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှေစီးဒုက္ခသည် အောင်ဆန်းစုကြည် ၀ီရသူ ၉၆၉ နဲ့ မဘသ နိုင်ငံသား ​နှဥေီးတျောလှနျရေး